नगरले आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेको भए १५ दिन ढुक्कले गएर बस्थेँ - Dipkhabar - Online News Destination
नगरले आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेको भए १५ दिन ढुक्कले गएर बस्थेँ
प्रकाश तिम्सिना June 25, 2021
दोश्रो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सबै स्थानीय तहलाई आइसोलेसन तयार गर्न निर्देशन दियो । सोही बमोजिम सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड आइसोलेसन सेन्टर तयार गरे । तर रामधुनी नगरपालिकाले भने दोस्रो भेरियन्टको सङ्क्रमण सकिन लाग्दा पनि आईसोलसन सेन्टर सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कोरोना सङ्क्रमणको दर अहिले पनि कायम नै छ । १० बेडको आइसोलेसनमा अक्सिजन सिलिन्डर, सिसी टिभी, खाना नास्ताको प्रबन्ध गरिसकेको छ । अस्थायी आइसोलेसन नगरपालिकाको बेवास्ताका कारण आज सम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
आइसोलेसनमा बस्न पाको भए ?
१ महिना अघि रामधुनी ८ का दिल बहादुर खुलाललाई कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण देखा पर्याे । पहिलो भन्दा दोस्रो भेरिन्यट अझ खतरा भएकाले तुरुन्त इनरुवामा गएर पिसिआर परीक्षण गरे । २ दिन पछि रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । घरमा बुढा भका बुवा आमा साना बच्चा भएकाले नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन बस्ने निधो गरे ।
तर नगरपालिकाले आइसोलेसन बनाई नसकेको थाहा पाए । अवस्था सामान्य भएकाले टाढा जानु भन्दा होम आइसोलेसन बसेको उनको भनाई छ । घरमा एउटा मात्रै शौचालय, बाथरुम भएकाले पनि प्रयोग गर्न बाध्य भए । नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर त बनाउन सकेन सङ्क्रमित हुँदा एक कल फोन समेत नगरेको उनको गुनासो छ ।
‘पिसिआर परीक्षण छिमेकी पालिकामा गरे । आइसोलेसन नभएकाले घरमै बसेँ । १५ दिन पछि रिपोर्ट परीक्षण गर्दा विराटनगरमै पुगेर आफ्नै खर्चमा परीक्षण गरे । यस्तो अवस्थामा त मलाई कुनै सहयोग गर्दैन भने हामीले के का लागि स्थानीय सरकार छ भन्ने ?’ खुलाल प्रश्न गर्छन्, ‘अन्य पालिकाले सङ्क्रमितको घरमा औषधी, फलफूल, अक्सिजन नाप्ने मेसिन लिएर मेयर, उपमेयर जाने गरेको फेसबुक हेर्दा थाहा हुन्छ । तर हाम्रा मेयर, उपमेयर त एक कल समेत गरेर सोध्नु हुन्न ।’
तयारी अबस्थामा आईसोलेसन सेन्टर
पिसिआर परीक्षण अत्यन्त कम,नगरसँग सङ्क्रमितको छैन तथ्याङ्क
रामधुनी नगरपालिकाको मुख्य बजार थोरै छ । धेरै जसो भूगोल ग्रामीण भेगमा पर्छ । नगरले बजार क्षेत्रमा मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको छ । ग्रामीण भेगमा नगरले कुनै पनि पिसिआर परीक्षण गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा छिमेकी पालिकाको तुलनामा रामधुनीको पिसिआर परीक्षण कम छ । दोस्रो भेरिअन्ट देखिए यता कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ सय ६ जना मात्रै छ । ९ वटा वडा मध्ये सबै भन्दा धेरै परीक्षण वडा नम्बर ५ मा ८८ जना रहेका छन् । जुन वडा झुम्का बजार क्षेत्र हो ।
सबै भन्दा ग्रामीण भेगमा पर्ने वडा नम्बर ८ जम्मा ४ जना कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण रहको स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा पनि थाहा हुन्छ की नगरपालिका बजारमुखी छ । १ सय १४ जना होम आइसोलेसनमा छन् । १ सय ९२ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । त्यस्तै अस्पतालको बेडमा २ जना हरेका छन् । हाल सम्म ११ जना सङ्क्रमितले ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
माथिको तथ्याङ्क नगर आफैले गरेको परीक्षणको मात्रै रेकर्ड हो । जनताले छिमेकी पालिका तथा अस्पतालमा गएर पिसिआर परीक्षण गरेको डाटा नगरको स्वास्थ्य शाखामा छैन ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकार निदायो
स्थानीय सरकारले जनताप्रति जति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस रामधुनी नगर सभापति सुदिप अधिकारी बताउँछन् ।
भवन तयार छ । अक्सिजन सिलिन्डर तयारी अवस्थामा छन् । खानको व्यवस्था भई सक्यो । १० बेड पनि छन् । तर एक जना जनशक्ति पुगेन भन्दै नगरले जवाफ दिनु लज्जाको विषय भएको उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गर्नुपर्ने काम नगरी विभिन्न बहाना बनाउनुले सिङ्गो नगर बासीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
२ महिना भन्दा बढी भई सक्यो भवन निर्माण भएको तर आज सम्म सञ्चालन गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा हैन सास्ती दिएको उनले बताए । आइसोलेसन सञ्चालन गर्न नसके पनि कम्तीमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरौँ भनेर पटक पटक जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई हाम्रो पार्टीले झकझक्यायो, कुरा सुन्ने बाहेक केही काम गर्न नसकेको नगर सभापति अधिकारीको भनाई छ ।
त्यस्तै स्थानीय युवा पुष्प कार्की पनि स्थानीय सरकारले कोभिडमा गर्नु पर्ने सामान्य काम पनि नगरको बताउँछन् । उनले भवन तयार हुँदा पनि मेडिकल अफिसर नै नपाएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्नु जनता प्रतिको बेवास्ता रहेको बताए ।
अन्य पालिकाको तुलनामा पिसिआर परीक्षण दर पनि कम रहेको छ । नगरले पिसिआर परीक्षण दर बढाउने, आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान नै नगएको कार्कीले भने, स्थानीय सरकारले गर्न चाहे आफ्नै खर्चमा भवन निर्माण गरी आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्न सक्छ । तर यहाँका जनप्रतिनिधिको उदासीनताका कारण आम जनताले चाहे जस्तो सेवा पाउन नसकेको उनको ठहर छ । वडाले निर्माण गरेको भवनमा नगरपालिकाले किन प्रयोग गर्ने ? यता वडाले आफ्नो खर्चले निर्माण गरेको भवन किन नगरलाई दिने जस्ता अदृश्य कारणले आइसोलेसनमा समयमा बन्न नसकेको कार्कीको भनाई छ ।
नगरप्रमुखको एउटै बोलिः खोइ डाक्टर ?
आइसोलेसन सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै पटक पटक आलोचित बनेको नगर हो, रामधुनी । भवन निर्माण, अक्सिजन सिलिन्डर, खानाको टेन्डर लगायतको काम गरी सकेको नगरमा के कारणले सेन्टर सञ्चालनमा आएन ? भन्ने प्रश्नमा नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीको एउटै बोली छ । त्यो हो डाक्टर खोइ ? नगरले दुई पटक सम्म एमबिबिएस पास गरेको मेडिकल अफिसरको आव्हान गरे पनि कसैले पनि आवेदन फारम नभरेको नगर प्रमुख चौधरीको भनाई छ । ‘आइसोलेसन सेन्टर २४सैं घण्टा सञ्चालन गर्न ३ जना मेडिकल अफिसर चाहिने हुन्छ । हामी सगं एक जना त हुनुहुन्छ । तिनै जना नपाए पनि दुई जना सम्म पाए सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेका कारण डाक्टरकै अभाव भएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’ प्रमुख चौधरीले भने ।
मेडिकल अफिसरको सरकारी तलब हो ४० हजार । हामीले नगरले धेरै दिने पनि कुरै भएन । किनकि भोलि लेखा परीक्षणको डाटामा बेरुजु पनि आउन सक्ने हुन्छ । त्यति थोरै रकममा डाक्टर आउन नमानेको प्रमुख चौधरीले बताए । तर कोभिड सञ्चालनका लागि भनेर एक शीर्षकबाट १०÷१२ हजार भत्ताको व्यवस्था गर्दा पनि डाक्टर ल्याउन सकेको उनको भनाई छ ।